Edemede anyị mere na nso nso a 6 Isi okwu ugha gwara echiche na-ezighị ezi na azụmahịa mba ma ọ bụ nke mba ọzọ kwesịrị izere ịchọ mpaghara. Ọ bụghị naanị na nghọtahie, ọ bụ nnukwu ndudue. Mepụta usoro SEO nke na-eme ka ị nwee mpaghara nwere ike ịbụ obere asọmpi, chọọ obere akụrụngwa, ma bulie nloghachi gị niile. Na ọ dịghị ego gị ogo na-abụghị ala Keywords ma ọ bụ nkebi ahịrịokwu. Na-abụghị, ogo nke ọma na mpaghara nwere ike ịchụ ọkwa gị mba na mba.
Nchọta ime obodo ejedebeghị na ndị na-abanye okwu gbasara ala na mpaghara ọchụchọ. Cheta na ọganiihu na nso nso a na algorithms ọchụchọ na-eji netwọkụ mmekọrịta gị iji bulie ma gosipụta nsonaazụ dị mkpa. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na imirikiti netwọkụ mmekọrịta gị dị n'akụkụ gị na mpaghara ala - yabụ n'ezie nsonaazụ azụmaahịa mpaghara ga-ebili n'elu. Ọbụghị naanị nke ahụ, na iji ma ọ bụ na-enweghị isiokwu mpaghara, Google na-eji ọnọdụ mpaghara gị iji dozie nsonaazụ ị na-enweta.